Channel Lover, Author at Channel Lover
March 14, 2022 by Channel Lover
ယနေ့နံနက်(၈)နာရီတွင် ကြက်သီးထစရာ မီးလောင်မှုကြီး(ရုပ်သံ) ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၀န်းကျင်ခန့်တွင် Taoyuan မြို့ ရှိ Young Lion စက်မှုဇုံတွင် ရှိသော Carrefour Yangmei Logistics Center ၏ ကုန်လှောင်ရုံတွင် မီးလောင် မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်…… လူအသေအပျောက် မရှိကြောင်း သိရှိရပြီး မီးလောင်သည့်အထဲ ပါသွားသောပစ္စည်း ပမာဏများသည်ဟု သိရပြီးမီးလောင်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲပါ……. လက်ရှိတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့သည် မီးသတ်ယာဉ် ၂၅ စီးဖြင့် လူပေါင်း ၆၁ ဦးကို စေလွှတ်ထားပြီး စင်ချူခရိုင် နှင့် အနီးဆုံးမြို့များကိုလည်း ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက် ရေလှောင်ကန်ထရပ်ကားများ ပေးပို့ရန် အကြောင်း ကြားထားသည်ဟု သိရပါသည်…….. 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 … Read more
လိုင်းပေါ်ကချစ်သူကို ယုံစားမိလို့ အဖြစ်ဆိုးခဲ့ရတဲ့ အသက်(၂၀)အရွယ် ကောင်မလေး လိုင်းပေါ်ကချစ်သူကိုယုံပြီး အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာခဲ့ရာ ကောင်လေးက တစ်လဘဲပေါင်းပြီး မောင်းထုတ်ခဲ့လို့ လမ်းဘေးတွင်နေထိုင်ခဲ့ရသည့် အသက်၂၀ အရွယ်ကောင်မလေး။ Guangdong ပြည်နယ် Foshan ရှိ လမ်းဘေးခုံလေးတစ်ခုပေါ်တွင် ငယ်ရွယ်သေးသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်က အိပ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Sohu ဆိုသည့်အမျိုးသမီးကို အခြေအနေကို သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရာမှ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာ အသက်၂၀ အရွယ်သာရှိသေးပြီး လိုင်းပေါ်တွင် ချစ်ကြိုက်မိခဲ့သော ကောင်လေးကိုယုံကြည်ပြီး သူ၏မိဘနေအိမ်မှထွက်လာခဲ့တာ ဘဝတစ်ခုထူထောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူ၏ချစ်သူကောင်လေးဟာ တစ်လအထိပေါင်းသင်းနေထိုင်ပြီးသောအခါ စိတ်ကုန်လာခဲ့ပြီး ကောင်မလေးကို မောင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကောင်မလေးဟာ အဝတ်ထုပ်လေးကိုဆွဲပြီး ကောင်လေးထံမှ ထွက်ခွာလာခဲ့ကာ နေအိမ်သို့လည်း မပြန်ရဲတော့သဖြင့် လမ်းဘေးတွင် အိပ်စက်နေထိုင်ခဲ့တာဟုသိရပါတယ်။ စာဖတ်ပရိတ်သက်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ညီမလေးတွေလဲ လိုင်းပေါ်ကလူတိုင်းကိုယုံပြီး … Read more
“၇ ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း” (၁၃.၃.၂၀၂၂) မှ (၁၉.၃.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တနင်္လာသားသမီးများ အင်္ဂါသားသမီးများ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ကြာသပတေးသားသမီးများ သောကြာသားသမီးများ စနသေားသမီးများ ============== “၇ ရက်သားသမီးမ်ားအတြက် တစ္ပတ္စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း” (၁၃.၃.၂၀၂၂) မွ (၁၉.၃.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ တနင်္ဂနေသြားသမီးမ်ား တနင်္လာသားသမီးမ်ား အင်္ဂါသားသမီးမ်ား ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးမ်ား ကြာသပတေးသားသမီးမ်ား သောကြာသားသမီးမ်ား စနေသားသမီးမ်ား crd
အမေရိကန်ကို အီရန်က ဒုံးကျည်ဖြင့် ဆော်ပြီ(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ အီရန် နူးကလီးယားအရေးပျက်ပြယ်သွားပြီးနောက် အီရတ်ရှိ အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းအား အီရန်မှ ဒုးံကျည်ဖြင့်တိုက်ခိုက်🚀 အီရန် နူးကလီးယားအရေး သဘောတူညီချက်ကို ပြန်ပြီးအသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားကြတာမှာ သောကြာနေ့က နောက်ဆုံးအဆင့် ပြီးဆုံးခါနီး အချိန်ရောက်မှ ပျက်ပြယ်သွားပြီးနောက် အီရန်က အီရတ်မှာရှိတဲ့ အမေရိကန် အခြေစိုက်စခန်းအား ဒုံးကျည်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်သား ၃၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပင်တဂွန် စစ်ဌာန ချုပ်မှ ပြောကြားကြောင်းသိရသည်…… 𝓣𝓱𝓮𝓽 𝓜𝓪𝓾𝓷𝓰 unicode အမရေိကနျကို အီရနျက ဒုံးကညျြဖွငျ့ ဆျောပွီ(ရုပျသံ) ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ…။ အီရနျ နူးကလီးယားအရေးပကျြပွယျသှားပွီးနောကျ အီရတျရှိ အမရေိကနျစဈအခွစေိုကျစခနျးအား အီရနျမှ ဒုးံကညျြဖွငျ့တိုကျခိုကျ🚀 အီရနျ နူးကလီးယားအရေး … Read more
BOB မှာ မုန်တိုင်းတွေလာမယ် 🌀🌀🌀⚠⚠⚠🌧🌧🌧⛈⛈⛈🌩🌩🌩 ၂၀၂၂ မတ်လ ၂၂ရက်နေ့မှာအန်ဒါမန်ကျွန်းစုမြောက်ဖက် အနီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုန်တိုင်းငယ်တစ်လုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမတ်လ ၂၃ရက် ၂၄ရက် ၂၅ရက်နေ့တွေ မြောက်ဖက် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းကို ဦးတည်ရွှေ့လျှားကာ ပိုမိုအားကောင်းနိုင်ပြီး ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း အဆင့်ကို ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းပဲကူးတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်း တွေမှာမိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မတ်လမှစတင်တဲ့ မုန်တိုင်းသည် ဧပြီမေလတွေအထိ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွေမှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး မုန်တိုင်း အဆင့်တွေအထိလညေးရောက်ရှိနိုင်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေသမားများတောင်သူလယ်သမားများ ဆားလုပ်ငန်း အုတ်လုပ်ငန်း ရာဘာလုပ်ငန်း မြို့ပြအင်/ယာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပငန်းများနှင့် ရာသီဥတုကို တည်မှိလုပ်ကိုင်နေကြသူများ ပင်လယ်ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသူများ အားလုံးအတွက် မင်းဂွတ်သီးလေးရဲ့ တိကျမှန်ကန်တဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လဝေး ရက်ဝေး ရက်နီးခန့်မှန်းချက်များကို ခန့်မှန်းပေးနေပါတယ် မင်းဂွတ်သီးလေးရဲ့ မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မျ … Read more
မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်မည်ဟု နက္ခတ်ပညာရှင်ဟောကိန်းထုတ်
လာမည့် မတ်လ၂၉ ရက်နေ့ (တပေါင်းလဆုတ် ၂ ရက်) နက္ခတ်လပြည့်ချိန်တွင် အင်္ဂါဂြိုလ်ကို ရာဟုအရိပ်မည်းဖုံးလွှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇေယျာကို (နက္ခတ်ဥယျာဉ်) က ဟောကြားထားပြီး။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးအကြိမ်တွင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနန်းကျပြီး အထိန်းအသိမ်း ခံခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ လာမည့် ၂ဝ၂၂ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်၊ တနင်္လာနေ့၊နက္ခတ်လပြည့်ချိန် နံနက် (၁) နာရီ (၁၈) မိနစ်အချိန်တွင် အင်္ဂါနှင့်ရာဟုဂြိုလ်များ ဒီဂရီတိက်စြာ ပူးယှဉ်ကြမည်ဟု နက္ခတ်ပညာရှင်က ဆိုသည်။ ထိုသို့ပူးယှဉ်မှုမှာ မြန်မာ့အရေးကိစ္စများအတွက် များစွာလွှမ်းမိုးပတ်သက်လာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။(၁၈) နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်ပူးယှဉ်လေ့ရှိသော ၎င်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော နောက်ဆုံးအကြိမ်သည် ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၂) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ နက္ခတ်လကွယ်ချိန်တွင် ပူးယှဉ်ခဲ့သည်ဟု ပညာရှင်က ဖော်ပြထားသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပူးယှဉ်သောရာသီသည် … Read more
မှော်ဘီလေတပ်မှ အရာရှိ ၂ ဦးနှင့် မိသားစုဝင် ၁ ဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီးပြီး ရေကြည်အိုင်စစ်ကြောရေးတွင် စစ်ဆေးနေ ရုပ်သံ
မတ်လ ၁၃ ရက်၊ ည ၇ နာရီအထိ နောက်ဆုံးရသတင်းများ မှော်ဘီလေတပ်မှ အရာရှိ ၂ ဦးနှင့် မိသားစုဝင် ၁ ဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီးပြီး ရေကြည်အိုင်စစ်ကြောရေးတွင် စစ်ဆေးနေ ရုပ်သံ အောင်ပန်းမြို့ လျှပ်စစ်ရုံး ဗုံးပစ် တိုက်ခိုက်ခံရ မန္တလေးမြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များတွင် ရေပြတ်လပ် ဦးကျော်ဇေယျ PPPပါတီတွင် နုတ်ထွက်စာတင်ထားခြင်းမရှိသေးဟုဆို Photo – Source From Citizen Journalist Srouce -Mizzima unicode မတလြ ၁၃ ရကြ၊ ည ၇ နာရီအထိ နောကဆြုံးရသတငြးမွား မှောဘြီလတပေမြှ အရာရှိ ၂ ဦးနှငြ့ မိသားစုဝငြ ၁ ဦးကို ထပမြံဖမြးဆီးပှီး ရကှညေအြိုငစြစကြှောရေးတှငြ စစဆြေးနေ ရုပသြံ … Read more
အားလုံး မုန်တိုင်းသတိ ⚠🌀🌀🌀⚠
မုန်တိုင်းသတိ ⚠🌀🌀🌀⚠ 14/03/2022 6:00am(MMT) အချိန်မှ နောက်၄၈နာရီမှ ၉၆နာရီအတွင်း အက်ဒါမန်ကျွန်းစု နိကိုဗာကျွန်းစုတွေအနီးမှာလေဖိအားနည်းလေဝဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းအထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖိအားမြင့်လေထုများတရုတ်နိုင်ငံဖက်ကိုဆုတ်ခွာနေသဖြင့် အထူးစောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ် ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့ သို့မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံဖက်ဦးတည်နိုင်သလို အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ဖက်ကိုလည်းဦးတည်ရွှေ့လျှားနိုင်ပါတယ် အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမိုးများစွာသက်ရောက်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိပါတယ် အရေးကြီးချိန်မို့ အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ပြီး Update ခန့်မှန်းပေးနေပါမယ် အများသိရှိကြစေရန် share ပေးကြပါ မှန်းချိန် 14/03/2022 at 6:12am(MMT) Su Su San 𝘾𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩 𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚𝙙 𝙒𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙘𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝐌𝐞𝐭𝐞𝐨𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 unicode မုနျတိုငျးသတိ ⚠🌀🌀🌀⚠ 14/03/2022 6:00am(MMT)အခြိနျမှ နောကျ၄၈နာရီမှ ၉၆နာရီအတှငျး အကျဒါမနျကြှနျးစု နိကိုဗာကြှနျးစုတှအေနီးမှာလဖေိအားနညျးလဝေဲဖွဈပျေါနိုငျပွီး ပိုမိုအားကောငျးလာကာ ဘင်ျဂလားပငျလယျအျောအလယျပိုငျးအထိရောကျရှိနိုငျပါတယျ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖိအားမွငျ့လထေုမြားတရုတျနိုငျငံဖကျကိုဆုတျခှာနသေဖွငျ့ အထူးစောငျ့ကွညျ့ရပါလိမျ့မယျ ဘင်ျဂလားဒခြျေ့ သို့မဟုတျမွနျမာနိုငျငံဖကျဦးတညျနိုငျသလို … Read more
တောထဲမှာ ထမင်းခြောက်ရက်တိတိမစားရဘဲ အသေအကြေတိုက်ခဲ့ရတဲ့ ပထဆုံးတိုက်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြလာတဲ့ PDF လူငယ်တစ်ဦး……………….
တောထဲမှာ ထမင်းခြောက်ရက်တိတိမစားရဘဲ အသေအကြေတိုက်ခဲ့ရတဲ့ ပထဆုံးတိုက်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြလာတဲ့ PDF လူငယ်တစ်ဦး ရဲစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့ လူငယ်တွေကတော့ အာဏာရှင်ကို အစွမ်းကုန် တိုက်ထုတ်ချေမှုန်းဖို့အတွက် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကို ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြည်သူ့ရဲဘော်ဘဝကို ဂုဏ်ယူစွာခံယူလိုက်ပြီး အားလုံးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တွေက အရာရာကို စွန့်လွှတ်စွန့်စားခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးကတော့ မြို့ပေါ်မှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆန္ဒပြရာကနေ အခုလို PDF ဘဝကို ပြောင်းလဲခံယူခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလူငယ်လေးက တောထဲတောင်ထဲမှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုဒဏ်တွေကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးမှ စစ်ပညာတွေကို သင်ယူခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း သူက မြေပြင်မှာ အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကတစ်ဆင့် ဖွင့်ဟပြောပြလာခဲ့တာ … Read more
သူမကို ဂုဏ်ပြုရေးဆွဲပေးတဲ့ ပုံတူပန်းချီကြောင့် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့အလှပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာဝတ်စုံတွေကိုသာ အများဆုံးဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ မြန်မာမော်ဒယ်နဲ့သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင် ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ကူးရင်း ကောင်းမွန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်ကြခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ပိုမိုချစ်ခင်ရပြန်ပါတယ်။ သူမကိုတော့ စစ်ကောင်စီမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားတာကြောင့် လက်ရှိမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မြနှင်းရည်လွင် ကတော့ စစ်ကောင်စီကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ မြနှင်းရည်လွင် ကတေ့ာ ပရိသတ်တစ်ဦးရေးဆွဲပေးတဲ့ ပုံတူပန်းချီကားလေး‌ကြောင့် ပျော်ရွှင်နေပါတယ် ။မြနှင်းရည်လွင် ကတော့ ပန်းချီကားလေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့လူ့မှု့ကွန်ယက်ပေါ်မှာအခုလိုပဲ မျှဝေထားပါတယ်။ သူမပုံကိုဆွဲပေးထားတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါသေးတယ်။ မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ လတ်တလောမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ခံယူချက် ခိုင်မာစွာနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အားဖြည့်ပါဝင်နေတာဆိုလည်း … Read more